Dhageyso: Maamulka Gobolka Banaadir oo booqasho ugu tagay dadkii ku dhaawacmay Qaraxii Maka Al mukarama – Walaal24 Newss
March 2, 2019	1	By walaal24
Guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee G/Banaadir Marwo Basmo Caamir ay wehliyaan Gudoomiyaha Haweenka Qaranka Jawaahir Baarqab, wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka Soomaaliya C/rashiid Maxamuud Xasan iyo mas’uuliyiin kale oo booqatay isbitaallada Madiina iyo Digfer ayaa dadka dhaawacyada ah ee ku jira isbitaalladaasi gaarsiisay deeq lacageed, iyadoona tacsi u dirtay ehellada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi.
Waxaa soo hagaageyso xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay weerarkii xooganaa ee maalin ka hor ka dhacay waddada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kadib markii loo fidiyay daryeel caafimaad, dadkan oo ah kuwa rayid ah ayaa waxa ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay weerarkaasi.
Marwo Basma caamir ayaa booqasho ku tagtay isbitaallada magaalada Muqdisho ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka dhaawacyada ah, kana warbixiyay xaaladdooda caafimaad.
Dhinaca kale Madaxda caafimaadka isbitaalka Madiina C/qaadir Qalinle ee magaalada Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay tirada guud ee dhaawacyada la dhigay isbitaalkaasi, kuna sheegay 34 ruux oo dhaawcyo ah iyo 11 qof oo Meydad ah.
Geesta kale guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee G/Banaadir Marwo Basmo Caamir oo booqatay isbitaallada Madiina iyo Digfer ayaa dadka dhaawacyada ah ee ku jira isbitaalladaasi gaarsiisay deeq lacageed, iyadoona tacsi u dirtay ehellada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi.
Ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka Soomaaliya C/rashiid Maxamuud Xasan ayaa sheegay in XFS ay garab taagnaan doonto dadka waxyeeladu soo gaartay, waxaana sidoo kale uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al Shabaab.
Madaxdii booqashada ku tagtay Isbitaalada magaalada Muqdihso ay hor ka ceysay Gudoomiye ku xigeenka arimaha Bulshada ee Gobolka Banaadir. Gudoomiyaha Haweenka qaranka, Xoghayaha xafiiska Ra’iisal wasaaraha iyo Wasiir ku xigeenka wasaarada Gargaarka ayaa Warbaahinta lahadlay.
Halkan hoose ka dhageyso hadalada Mas’uuliyiinta:-
Guddomiye Mursal oo Jordan uga qeybgalay shir horu dhac ah oo guddoonada Baarlamanada Carabta dhexmaray
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya oo ku guuleysatay in ay Caalamka ku qanciso qaabkii Somalia Deymaha looga cafin lahaa
Daawo: Gudomiyaha Xisb.Wadani Cirro Madaxweyne Muuse Biixi ha is casilo, Siinlayo waa in maxkamad la soo taago